Maraykanka oo ka hadlay Duqayn ay Diyaaradahoodu u geysteen Al-shabaab | Berberanews.com
Home WARARKA Maraykanka oo ka hadlay Duqayn ay Diyaaradahoodu u geysteen Al-shabaab
Maraykanka oo ka hadlay Duqayn ay Diyaaradahoodu u geysteen Al-shabaab
Jamaame(Berberanews)- Ciidamada Maraykanka ayaa duqayn ka dhan ah Al-shabaab ka fuliyay degaanka Baneeni oo 8-KM dhanka galbeed kaga beegan Degmada Jamaame ee Gobbolka Jubbada Hoose.
Duqayntaan ayaa taliska Maraykanka Afrika ku tilmaamay inay ciidamada milatariga Soomaaliya ka caawinayso sidii ay dhul badan ugala wareegi lahaayeen ururka Al-shabaab oo saldhigyo culus ku leh aagaas.
Duqayntaan ayaa lagu bartilmaameesaday dagaalyahannada al-Shabaab oo hanjabaad culus u diray ciidamadda Maraykanka iyo kuwa Soomaaliya oo iska kaashanaya, sidaasi waxaa yidhi, Maj. Gen. William Gayler, oo ah madaxa howlgalka Taliska Mareykanka ee Africom.
“Al-Shabaab waxay ka kooban tahay argaggixiso iyo dambiilayaal doonaya inay si ballaadhan u faafiyaan nacaybka iyo rabshadaha. Waxaa naga go’an in aan taageerno jaalayaasheena Soomaaliyeed iyo horumarka amniga aan si wada jir ah uga wada wadno gobolka. ” ayaa lagu yidhi warkaan.
Africom waxay sheegeen inay qiimaynayaan weerarkan oo lagu dilay saddex xubnood oo katirsan Al-shabaab.
Previous articleHaweenayda Afrika ugu taajirsan “waxay diiratay” dalkeeda hooyo
Next articleMadaxweyne Biixi oo xil-ka-qaadis iyo isku bedel ku sameeyay Agaasimayaasha